Ruzivo rwekuponesa hupenyu hwehupenyu hwako hwezvino: Martin Vrijland
Akaiswa mukati THE SIMULATION	by Martin Vrijland	pana 22 July 2019	• 19 Comments
Yenguva yekubuda kunze kwenyika yeroto uye kutanga kutarisa nyika yakakupoteredza kune zvakakosha. Izvo zvichaunza kuchinja kukuru muupenyu hwako. Saka ndinoda kuisa pfungwa dzako kune mharidzo iri pasi apa yaRichard Thieme (pasi payo penyaya ino), aimbova mupirisiti akazvishandura kuti ave munhu ane simba uye akashanda nemakambani akadai saArthur Andersen, Allstate Insurance, General Electric, National Security Agency (NSA) ), Microsoft, uye Dhipatimendi reUnited States. Iyi mharidzo inotaura zvinhu zvose zvaunoda kuziva kuti unzwisise nyika nhasi.
Kana iwe my article verenga nezvomurume asingaoneki (uye maavatat anofambiswa nemugadziri weiyi simulation), ipapo iwe uchanzwisisa kuti vanhu vane mukurumbira vakaita saRichard Thieme veboka rekupedzisira. Uyu muverengi mutsva anogona kuda kusiyira pasi mushure memutongo wekupedzisira uyu, asi ini ndinokurudzira kuti iwe udzidze izvo chaizvo zviri kutaurwa pano uye nei mabhendi mazhinji uye masayendisiti parizvino akataura kuti isu tinogara mukufungidzira. Izvo hazvisi pasina uye zvakakodzera kukoshesa kufunga nezvazvo. Ini ndinotozvidairawo inokosha kuti anzwisise zviitiko zvemazuva ano; kuziva kuti chii chiri kutumirwa uye uye kuziva kuti chii chingave chichiitwa pamusoro pezvinyorwa-uye-kunyengedza motokari dzinogona kuonekwa mune zvenhau uye zvematongerwo enyika. Kana zvakare:
Nekufungisisa mukati memusoro wenyaya uyu uchaona hunyanzvi hwematambudziko ese epanyika uye zvakare uone mhinduro.
Mutsara wekutanga waRichard Thieme panguva ino yemusangano weDef Con hackers kubva ku2015 (ona vhidhiyo pazasi) saka zvakakodzera kuongorora. Ndokumbira utarise: iyi mharidzo yakatanga makore mana, saka mamiriro ezvinhu mumunda wekuvandudzwa kwetekinoroji, anotsanangurwa naTieme, izvozvi apererwa nezano kana tikachengeta mutemo waMore. Nekudaro, sekureva kwevamwe, mutemo weMoorish ungadai usingachashandi, dai kwanga kusiri kwekuguma kwekudzikira kwenzvimbo yemachipsi (iyo exponential transistor-wadogo yekudzikisa zviitiko zvakaisa hwaro hwemitemo yaMoore) kuita nzira yekufambira mberi mune nharaunda ye neural network (iyo inoita kuti mutemo waMoore uite seuri kushanda zvakare).
Neural network dzinoedza kutevedzera basa rebongo redu. Uhu hwedu hwakadzidziswa kubva pakuberekwa uye vadzidzisi vedu vanotiudza patinoona kati kana chimwe chinhu chinoreva shoko. Isu isu vanhu tinodzidza kubva kune 'deta yakagadzirirwa' iyo vabereki vedu nevadzidzisi vedu vanodzidzisa isu. A neural network inodzidza kubva kune data yakagadzirirwa iyo inogamuchira. Iyo deta yakagadzirirwa inofanira kutarisirwa nemukuru wepamusoro kuti aidzidzise. John Hennessy, nyanzvi yezvemakombiyuta eAmerica, academician, bhizimisi uye mutungamiri weAlbetbet Inc. (Google), rinotsanangura iyi mharidzo kukosha uye nzira yeAI uye mashandisirwo emagetsi.
Zvamunogona kudzidza kubva kumharidzo iyoyo ndokuti kukosha kwemashoko kunokosha. kana iwe uchitaura izvozvo kune izvo vanhu vakawanda vangave vakadhakwa nazvo, iko Snapchat, Instagram nemhando dzose dzemamwe magwaro ezvehuwandu hwemagariro ari mune zvigadzirwa zve data zvinoramba zvichigadzirwa, zvino unogona kufungidzira kuti nyika iri chaizvo mune imwe huru 'yakarongwa data yakagadzirirwa' shandurwa. Iwe neni tinopa deta dzese iyo iyo AI inoshandisa kudzidzisa.
Iyo mharidzo yeHennessy yakasimwa zvakare, nokuti Facebook yakabva yakagadzirirwa AI iyo inogona kushanda pa PC isina nyore panzvimbo yekombiyuta yakawanda yegaga kubva kuGoogle Alphabet iyo yakadzidza mitambo yakaoma zvikuru kuenda pasina nguva uye kubva mutambi akakurumbira munyika. Facebook yakagadzira AI system (anonzi Pluribus) iyo nguva uye yakakwanisa kurova vatambi vema poker kubva ku6. Izvozvi AI inokuvadza vatambi vakawanda kuburikidza nekuoma kwakakunda migumisiro. Mutambo unofanana neGo kuenda uri nyore kune AI, pasinei nokuti pane zvakawanda zvinoita bhodhi kusanganiswa kupfuura kune maatomu munharaunda inowoneka (nekuti ruzivo rune ruzivo runowanika kuona). Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuAI kudzidzisa. Izvi zvakasiyana nekutengesa, nokuti uri kutarisana ne bluff chinhu chevatambi vanoverengeka. Facebook saka yakashinga kubudisa mashoko anotevera:
"Zvakachengeteka kutaura kuti tiri pamunhu wepamusoro uye izvo hazvisi kuzochinja."
Isu tiri 2019 uye kukura kwehunyanzvi kuri kuenda zvakanyanyisa. NVIDIA, iyo Grafiki kadhi inogadzira iyo indasitiri yemitambo (ikozvino yakakura kupfuura iyo indasitiri yemafirimu) yakavaka kare neural network inoita kuti zvive nyore kuvana deepfakes kugadzira uye kubudisa zvakadzika midzi. Saka iwe unogona kunge wakanyatsogadzirisa zviitiko, iwe unofunga.
Kana Richard Thieme akataura mune ino kuratidzwa pazasi nezve tekinoroji yaizivikanwa kare ikako, unogona kuzvifungidzira iwe patiri ikozvino. Vanhu vazhinji vachiri kufunga kuti tiri kutaura pamusoro peSciFi uye tinoreva kumafirimu kana yeBlack Mirror series paNetflix. Yakwana nguva yekuti uone kuti zvinhu zvese izvo zvawanga uchifunga kuti yaive sainzi ingano yatove chokwadi.
In ichi chinyorwa Ndakataurira hurukuro yaElon Musk yeNeuralink yekambani yake, iyo inovaka hutano-kombiyuta inoshandiswa kwehutano husina wireless kuInternet uye purogiramu yekushanda iyo interface. Kana iwe ukatarisa muTeeme mharidzo iri pasi apa, uchaona kuti mamiriro chaiwo ehupfumi hwezvinhu mune 2015 yakanga yakawanda zvikuru. PaDARPA ivo vatokwanisa kukanganisa uropi hwevanhu pasina zvipembenene. Imwe yenzvimbo dzekutsvakurudza ndeyekudzoka kwezviyeuchidzo, kubviswa kwezvinokonzerwa nemanzwiro kubva mumangariro, kubviswa kwezvimwe zviyeuchidzo, kuchinjwa kwezviri mukati memangariro uye kuiswa kwezviitiko zvitsva. Mumwe anoedza kuverenga pfungwa dziri kure uye kubvisa ruzivo. Imwe inotsvaga kushandiswa kweDNA kuti inzwisise uye inyore maitiro ekufunga, manzwiro uye mufambiro. Imwe inoshandisa pfungwa-to-mind communication, kutarisa kure (kuburikidza nemaziso uye uropi hwomumwe), pamwe chete nemafuta uye zvisiri izvo zvinoshandisa magetsi zvinodzora magetsi emagetsi europi kuti zvibvumira psychokinesis, clairvoyance uye telepathy.
Unogona here kufungidzira kuti ndeipi yakakura 'neural network' Elon Musk's Neuralink ichave nayo kana mamiriyoni evanhu achisarudza kutengesa ubongo hwavo mugore? Iwe unogona kufungidzira kuti mamiriro ezvinhu atove aripo apo maitiro aya asingasviki ekugadzirisa uropi (izvo zvatove zviripo maererano naRichard Thieme) zvakabatanidzwa ne network 5G?
Richard Thieme anotsanangurawo mamiriro ezvinhu nezvehupenyu hwose hwemuviri wemunhu uye biology yezvisikwa zvipenyu zvose. Sezvandave ndichirondedzera pano pane webhusaiti yemakore, biology yedu yakava aritemu uye dhiyabhorosi nyaya. AI, huru yekuunganidza data (iyo data inoshandiswa kubva kune unyanzvi hwemagetsi edzimba) dzichidzidza kuburikidza nehutano hwehupenyu uye zvakafanana uye zviri kuitika munharaunda ye teknolojia yeanano pamwe ne stem cell zivo uye mapepa evanhu vane map mapepa, anoita kuti zvibvirire nhengo nhengo. Thieme anosimbisa kuti izvo zvatinoona mumasayendisiti mabhuku anosvika makore mashanu shure kwekuti masangano akaita seDARPA atoita. Kubviswa kwemusoro wemonkey kwaive zvichiita makumi emakore akapfuura. Zvichakadaro, masero europi anokura mu laboratories uye mararamiro emagetsi ehupenyu nemakonzo ari kuvakwa.
Tichifunga kuti uropi hwemunhu hunosanganisira 80 mabhiriyoni neurons, iyo huru yakakura yeurusiya inogona kuwanika kune makambani makuru ema tech, hurumende nemasangano avo (saDARPA), ndeyechokwadi uropi hwomunhu.
Vanhu bio-avatar uye chirongwa cheAI chinodzora uropi
Ngatidzokerei kumucheto wekuti tinorarama mukuenzanisa (uko kwakataurwa kuti iwe haugone kurarama "mu" uye kuenzanisa, asi pane dzakawanda ruzivo rwakakwana nechimiro ichocho, seGadisi yemutambo wePasstation zvachose inoparara mumutambo), saka muviri wemunhu hausi chinhu chinopfuura avatar mumutambo uye huropi hwehupenyu ihupenyu hwehuwandu hwema avatar, iyo iyo neural-network yekudzidza nzira yakadzidzisa AI. In ichi chinyorwa Ndakatsanangurira nzvimbo iyo zvakadzama.
Zvinonyanya kukosha kuti iwe uone chinangwa chemashoko ekutanga. Iwe uchaona kuti hausi iye munhu waunoona paunotarisa mugirazi. Iwe unotarisa kuburikidza nemaziso e-bio-avatar yako (munhu akafananidzwa mumamiriro ezvinhu akafananidzwa), asi muonei chaiwo ari kunze kwekufananidza uku (sokunge mutambi we Playstation agere pamubhedha nemutongi ari muruoko rwake).
Ngatitarisei zvakanaka kaviri slits kuedza kubva kune physicist Niels Bohr, zvinoratidza kuti nyaya inongovapo chete kana pane mucherechedzi. Mune nyaya dzakawanda ndakatsanangura kuti tatove "tichirarama mukufananidza". Iwe unotanga kutanga zvakanaka kana iwe ichi chinyorwa verenga zvakakwana, tarisa pasi pe'kufananidza 'menyu chinhu kana kupinda muzwi rokuti' kuenzanisa 'mundima yekutsvaga. Ndinosiya chirevo ichocho shure kweizvi uye ndinogadzirisa kufunga kwekufunga kuti isu tiri kuto "kurarama mukufananidza". Ndakaita izvi nemaune muzvinyorwa zvinyorwa, nokuti haugone kurarama mukufananidza, asi unogona kunge uine chivimbo chakakwana chokuti iwe unogara mairi, asi kunyatsoona uye kutamba pamwe chete (kubva kunze).
Kana isu tiri kutamba kuenzanisa, saka panofanira kunge kune 'soul connection' nemunhu wepakutanga, zvakadai se5G wireless Neuralink kuwirirana, semuenzaniso, Google ye cloud platform simulation kana uri kuenda kunotaridzika mu2045 iyo inofanana noupenyu inoratidzika. Izvo 'mweya inogunun'una' naizvozvo ikokubatanidza kwehutano ne 'munhu wepakutanga'. Yako mamiriro ekufananidzirwa 'akafuridzirwa' uye anotungamirirwa kunze. In ichi chinyorwa Ndinotsanangura muchidimbu kuti chii chakafuridzirwa uye kuti hapasina kungofanana Ne Playing Characters (NPCs) yakakupoteredza, asiwo mavatari ayo anotungamirirwa nemuvakidzani (kana kuti 'muvakidzani') yemufananidzo. Kuverenga icho chinyorwa kunobatsira kunzwisisa zviri nani pfungwa ye "mweya" kana "kuziva".
The dualistic Luciferian virus simulation
Ndinoda kutora muverengi kutarisa kumashoko okutanga aRichard Thieme kubva mumharidzo iri pasi apa. Mune maonero angu, mazwi aya inoratidza zvakajeka kuti iyi avatar (Richard Thieme) inotungamirirwa ne 'boka rekuvaka'. Somuenzaniso, mumashure ekutanga kwe20 anotaura mumashoko akaita se "vana vanodzokorora unquote" nokuti anoziva kuti izvi ndezvokuvadzidzisa mukudzidzira; avatars inotungamirirwa neboka reLuciferian (kubva kunze kwekufananidzirwa uku). Vana vanodzokorora unquote ikozvino vane nzvimbo dzinokosha mumutambo wose we "zvakanaka nezvakaipa". Rega mazwi aya apinde mukati mako, nokuti anorondedzera pano mumasekondi mashomanana kuti uku kuenzanisira kwakavakirwa pamitambo kubva zvakanaka kune zvakaipa (dealism, yin / yan, liks / right, Christian / Muslim, programmers / hackers uye zvose kupa chimiro nekuchengetedza unamato). Anotaura zvakare kuti akafanoona kuti "vana vanodzokorora unquote" vaizova "vatungamiri vanofunga" vezana remakore rino; uye kuti vakava izvo.
Kubva pachipiri che28, iye anobva achienderera mberi nekutsanangura kuti aya 'avatars' (sezvandiri kuvadana) anotora nzvimbo dzakakosha uye akasika nzvimbo, yaanoti 'iyo IT nzvimbo kana kuchengeteka kana nzvimbo isina kuchengeteka isu tose tinogara". Kunyanya mumashoko iwayo anoudza vateereri vake zvavasina mubvunzo vanoziva (nokuti ndivo vaRififerian team team), asi izvo iwe neni zvatinoda chaizvo kuti tiwane kwatiri. Iwe unorarama iI space ye duality (kuchengeteka uye kusachengeteka). Iwe unorarama mukuenzanisa.
Vavhareji mutereri vangaramba vachipindura ne: "Kwete, haatauri mumusangano wevanokuvadza uye izvi zviri kungoita kuchengeteka uye kusachengeteka mumunda wemakombiyuta uye internet kana makambani emakambani uye saka". Zvisinei, kana iwe ukarega mharidzo yose ichipinda mukati mako, uchawana kuti pane Thieme chaizvoizvo anotaura pamusoro. Ingoteerera kubva kune wechipiri 40 iyo iyo inodzokorora mazwi ake eupristi: "Akagadzira juramu iyo tinorarama ". Zvose zvakazarurirwa zvinotevera zvinoputika uye Thieme anonyatsozarura uye anozvikudza pamusoro penzira iyo uwandu huri kutarisana pamwe chete uye hunochengetedzwa.
Zvose zvitsva kuminiti ye3e zvinoputika nezviratidzo, kusanganisira pa 2: Minimi 45, iyo iyo inoti: "Iyi mharidzo iri kuedza kutarisana nepfungwa yekuti vanhu vakazaruka maitiro ehuchenjeri nesimba". Inguva yokuti iwe neni tione zvinhu sezvavari. Sayenzi inotarisa zvose biology semutauro wemashoko. Icho chirongwa chemashoko. Icho chirongwa. Icho chirongwa cheAI. Kutaura zvakajeka, kuenzanisa. Mepu yemugwagwa yatinenge tava kugara iye zvino ndiyo inogadziriswa nemuvakidzani wekufananidzira uku kuvaka chimiro chitsva: kuenzanisa-mu-ku-kufanana, sezvakatsanangurwa mu ichi chinyorwa.
Sei tiri pamakanzira emugwagwa kuenda kune kuvakwa kwekuenzanisa-mu-ku-kuenzanisa? Dare rekutonga - mavatari ayo anotungamirirwa neboka ravaLififerian vavaki (kubva kunze) - tinoda iwe neni kuti tipe zvio-avatars (muviri wedu wemunhu) kutenderera mberi kuti tibatane neAI. Muchirevo ichocho zvakakosha kunyatsonzwisisa kuti uri ani uye kuti unofanirwa kuwona kuburikidza neicho chezvinhu zvose zviri (zvekuvapo). In ichi chinyorwa chiedza ini ndinoita izvo 'stem cell' yehupenyu hwedu ndeye. Kana wangoverenga izvi, ungangodaro wakaona kuti iyo tsvina yesero yekuvapo - iyo yose-inosanganisira kubuda kwemashoko - yakapa maitiro kune mumwechete maumbirwo emamwe maitiro (akadai se stem cell shaping masero ayo mumwe nomumwe ane munhu akagadzira basa mumutumbi) . Chimwe nechimwe sero ine zvigaro zvayo zvakasiyana uye ine maitiro ayo maitiro. Mumuviri, imwe sero inosvika pakukura kuva ziso uye imwe inokura kuva mwoyo, nezvimwe zvakadaro. Chimiro chako chepakutanga (icho chinonzwisisa / chinonyanya izvi zvakafanana) naizvozvo ndiyo nzira yekutanga yekuziva; chimiro chako. Iyi ndiyo yechokwadi yomufananidzo wehu yako.
Kufananidza kwatinoita ikozvino kunogona kurondedzerwa seutachiona. Mune maonero angu, isu tiri chapupu (muteereri / muteereri) mumutachiona wemavhidhiyo akawanda. Kunyatsotsanangurwa (verenga pa zvose zviratidzo uye zviitiko) tiri kutaura pamusoro pehutachiona hweLuciferian. Chimiro chetachiona ndechekuti inoedza kurwisa uye kutora mutumbi. Mune maonero angu, iyo ndiyowo chirongwa chekuvaka chirwere ichi. Utachiona hwehutachiona hunovakwa mukati me "stem cell yezvose zviri"; kuvhara, kutora uye kutora zvinyorwa-zvinyorwa----zvose-chii (chinonziwo 'quantum field'). Izvo zvinongobvira chete kana zvichibata mamwe masero. IA system iyo yatinogara (kuona / kutamba) inoda kuti tive nehuwandu hwedu hwezvokwadi (yedu yepakutanga imwe yomuumbi yezvokusika) inowanika kuhutachiona hwehutachiona.
Zvisinei, isu tinozivawo kubva kuhupenyu hwehupenyu (kubva muhupenyu hwedu hwevanhu) kuti hutachiona huripo kuti uedze hurongwa uye kuti hutachiona hunogona kukundwa. Kunyangwe munguva yemazuva ano yezvirwere tinowana pfungwa yokuti muviri wemunhu wakarashikirwa nekuzvipodza kwebasa, iyo ndeyechokwadi kusanganisa (uyewo propaganda). Ichokwadi chechimiro chekuzivikanwa (isu chekutanga chekuziva kwedu) inokwanisa kurwisa hutachiona uye kukurira utachiona hwehutachiona. Tinofanira kungoyeuka kuti tiri ani. Yeuka: iwe hausi muviri wako uye iwe hausi murwi wepfungwa dzako. Pfungwa dzako ndeye chirongwa cheAI chinodzidziswa neural neural network yako (central brain processor) (uropi hwako) iyo inofamba muimba yepamusoro yako avatar; munhu waunoona pahwindo rekufananidza uku naye waunofunga kuzviratidza iwe pachako. Utachiona hwehutachiona hunoputika patinenge tichiyeuka chechokwadi chechimiro chekuumba chimiro chedu: chimiro chedu chepakutanga chinobva kune stem cell yezvose zviri.
Source chinyorwa listings: zerohedge.com
Iyo "mweya yakagadziriswa," "kugadziriswa kwekuziva," izvo zvinodaro here?
Zvinhu zvose ndeyekufananidza: zvitendero zvose, kutenda kwose kunonyengera
Papa Francis akapayona chitendero chenyika itsva
Tags: 2.0, ubongo, Con, def, tsanangura, editig, Featured, gene, Hack, hacked, munhu, inowanikwa, mens, chokwadi, Richard, simulation, simulation, Thieme
22 July 2019 pa 14: 54
Ndinofananidza kuenzanisa kwezvino ne Droste effect, yakafanana neOuroboros, denderedzwa rakaipa iro vashomanana vanoziva kupfuurira kuburikidza ...
22 July 2019 pa 14: 55
Uyo anotarisa ndeye akacherechedza
22 July 2019 pa 16: 38
..this yangu yekusimbisa ichangogamuchirwa, ona ichi chirevo
2 maminetsi apfuura
Nguva yababa (Kronos.Saturn), mucherechedzi ndiye anoonekwa..rarama mune fungidziro aive ari maviri ekupokana masimba anoshandiswa kupa chikonzero
22 July 2019 pa 17: 19
Iyo mbiri mbiri script (iyo script inoshanda maererano nesimba rehuviri) inotumirwa munzira ne 'elitist avatars' (avo maattan anodzorwa nechikwata chaVakavaka vaLuciferian).
Rangarira: kufungidzira kungogara kungofungidzira kana vatambi vane rusununguko rwekusarudza. Zvikasadaro mhedzisiro yacho yaizogadzirirwa mberi uye yaisazova yekufungidzira, asi firimu.
Maavatat anoedza kufambisa script anofanirwa kusheedzera vatambi kuti vadzokere shure. Uku kudzvanywa kunovafambisa mune imwe nzira (seyakawedzera maturu uye matanda ebheti inoburitsa rakananga razvino).
Ndokusaka tichigona kuona kukara kwese kwese.
22 July 2019 pa 18: 02
"Mucherechedzi Ndiye Anocherechedzwa"
"Kudzivisa Kubatsira" !!
23 July 2019 pa 22: 17
22 July 2019 pa 17: 27
Idzo nyaya dzakanaka, asi dzakareruka uye dzakaoma uyeya dzemweya kugadzira izvo zviri nyore kwazvo, zvakati wandei.
Izvo chaizvo zviri nyore uye nyore kunzwisisa ini ndakapfupisa pamusoro mune 1 chinyorwa. Izvo zvinoponesa zvakawanda zvinodhura zvemweya zvidzidzo uye makosi.
Isu tiri vatambi vanocherechedzwa mune ino mutambi-mutambi waLuciferian hutachiona. Rangarira wako wega wekutanga uye mutambo wapera. Ndizvozvo!
Saka iwe hauna kuburuka kana kurasika, hauna kubatwa, hauna kuuya (uye unofanira kudzokera kumashure) .. Iwe haufanirwe "kupukunyuka kubva kune iyi matrix". Mushure mezvose, kana iwe uchitamba Playstwatn mutambo, yako yekutanga pachako iri panguva imwechete pamubhedha ine controller iri muruoko. Uchiri uye iwe waigara uri wekutanga fomu yekuumba fomu.
Isu saka tinofunga kuti hutachiona uhwu hahugone kupinda mukati mekutapukira stem cell. Tasarudza izvozvi nekuti tinozviona kuburikidza nazvo.
22 July 2019 pa 17: 34
Iko kunyepedzera kweiyo Ouroboros mhedzisiro yakagadzirwa nenzira iyi:
22 July 2019 pa 17: 40
Iko kunyepedzera kwekutenderera kwakashata kwekuberekwazve kwave kuri nyore kugadzira nekuita kuti vavaki vaLuciferian vavake simulation mune yekufungidzira. Onawo zvataurwa pazasi pechinyorwa ichocho.
Nyika yemweya iripo uye gurus varipo kuti vatitore kure kubva pachokwadi uye kutiita kuti titende kuti isu tiripano. Kana iwe ukaona kuti isu tinoona yekufungidzira (kunyangwe kana iri simuling-in-simulations), tinoziva kuti hatingambofa takanyatsove MU, asi tingozviona. Iye anoona achiri ipapo uye ari mukutonga.
Izvo zvine basa kuti iyo avatar uropi inozviona izvo.
22 July 2019 pa 18: 18
Isu tinozviziva iye zvino.Ndinofunga kuti kune iwe-kutanga vaverengi, iyo youtube mafirimu naChiron Ekupedzisira anogona kuzovhura ziso.
Somunhu anotanga, zvinogona kukubatsira kuti utange kubatanidza zvese izvi Anotsanangudza chaizvo kuti kuita zvinhu zviviri hakusi chinhu chekutora chikamu nekuti unochengeta simuling (kupikisa ibatsiro).
Ini ndaifanira kufunga nezve izvozvo kwenguva refu makore mashoma apfuura (pandakatanga kuona iyo yeWebhu yeWebhu mfululizo kubva kwaari)… Ini ndaifanirawo kuvaona nguva dze15.
Izvozvi zvakatemwa murima (kwatiri) asi kune mumwe munhu achangoongorora izvi zvechokwadi anogona kuve wakakosha ..
hans coudyser akanyora kuti:
22 July 2019 pa 19: 25
Zvakatora anopfuura awa kuti uverenge izvi zvakanyatsonaka.
Mushure mekunge ma lens abvisa heti yanga isipo.
Kazhinji ndinowanzova nekunzwa kuti ini / isu pachedu takanyora iyi yekutanga script ye / pasi - kunze kwekunge ichi chiri chinyorwa pano - uye kuti chimwe chinhu chakatora nzvimbo kana 'kuprinta' izvi nenzira yekuti kwedu chaiko haisati yaziva kana kubva pachinzvimbo ichi haikona kuona kuti iri sei edm.
Chandinoita zvimwe nekuwedzera ndechekuzivisa maitiro angu nezve izvi. Kana ndaireva - mukufungidzira kwekufungidzira kweangu mavambo - handingadi kushandisa yakawanda - pasina icho chaicho chinobata ipapo chinofanira kuitwa kubva mukufungidzira uku.
22 July 2019 pa 22: 12
Iwe unoreva kuti isu takanyora iyo yeLuciferian hutachiona system pachayo munzira yerudzi rwekunetseka?
Handizive kana ndakunzwisisa zvakanaka.
Unogona kutsanangura zvakare zvakare zvaunoreva?
23 July 2019 pa 00: 50
@Hans, Thieme anotoitsanangura nerakaregedzana rurimi rwemuchero mune yake mharidzo achishandisa iyo Möbius strip seyekufungidzira.
Chinhu chaivapo muchadenga-chakavezwa-chakavezwa chingave chisinganzwisisike kubva pachayo girazi chifananidzo - uyu mutengesi anopfekedza hukuru hwakakura shanduko pakati kuruboshwe kurudyi nekutenderera kwese. Izvo hazvigoneke kuti zvakasikwa zvingave neepfuma iyi, tarisa Non-orientable wormhole
23 July 2019 pa 00: 56
23 July 2019 pa 06: 11
Kugara papasi kana pasi zvakanyanya kana zvishoma seizvi isu takazvinyora isu pachedu. Chirongwa che luciferian chiri 'pamusoro' chakaunzwa ipapo sehutachiona - chakarondedzerwa newe, kusanganisira dourse nezvimwe ... Hazvina kunyorwa isu pachedu - 'kutisimbisa' isu. Izvi zvinobva kwakasiyana kwakasiyana nekwavo kuzvitonga. Kwekutanga kwedu hakuna hutongi pamusoro pazvo uye kunobatsira kubva etc ... - Chete? - kubva pane iyi yekufungidzira - mune yekufungidzira - izvi zvinogona kucherechedzwa. Utachiona hunotora dhizaini yedu kubva mukugadzirwa kwayo
23 July 2019 pa 09: 24
Kugara papasi kana pasi zvakanyanya kana zvishoma seizvi isu takazvinyora isu pachedu. Chirongwa che luciferian chiri 'pamusoro' chakaunzwa ipapo sehutachiona - chakarondedzerwa newe, kusanganisira dourse nezvimwe ... Hazvina kunyorwa isu pachedu - 'kutisimbisa' isu. Izvi zvinobva kwakasiyana kwakasiyana nekwavo kuzvitonga. Kwekutanga kwedu hakuna hutongi pamusoro pazvo uye kunobatsira kubva etc ... - Chete? - kubva pane iyi yekufungidzira - mune yekufungidzira - izvi zvinogona kucherechedzwa. Utachiona hunotora dhizaini yedu kubva mukugadzirwa kwayo uye unoishandisa kuwana icho chiitiko neruzivo kuburikidza nesu. Iyi hutachiona system haina kugadzirwa 'kutisimbisa' isu, iri mune yakanyanya kunaka mhedzisiro yacho. Pasi pakanyorwa nesu, kungoda kuseka & kutishamisa. Iko hakuna kupikiswa, chirongwa chemaonero maviri chinodiwa kuti uone izvi. Pfungwa iyi 'yakaiswa' mariri.
23 July 2019 pa 10: 26
Iyoyo zvakare sarudzo. Zvinogoneka zvakare kuti Lusifa akagadzira kopi yezvatak kuvaka kare.
Kunyangwe iwe unoitendeuka sei kana kuishandura, ndiLuciferian mune zvakasikwa uye zvisinei kuti unoitendeuka kana kuishandura, isu hatizozvigadzirisa "pamazinga eSims".
23 July 2019 pa 10: 45
Ini ndinoona kubva pamazwi ako kuti iwe uchiri kuda kuomerera pane pfungwa ye "hupenyu hwepasi pano". Hatirarame pasi pano. Wakazvizivisa ne "moyo wakaita kunge moyo" simulation.
Iyo chirongwa chako chehuropi AI (chinonziwo 'ego') chinoda kuomerera pane icho pfungwa.
Rega iende: iwe unotora chikamu mune yakawanda-mutambi simulation semuongorori WEMAHARA. Iwe haurarame PASI. Pasi nezvisikwa hazvipo. Kufungidzira!
23 July 2019 pa 12: 23
Zvakanaka, chinyorwa chakanaka. Nehurombo ruzivo urwu haruna kuchengeterwa iwo 'wepasi'. Izvo "zvepasi" zvinoita sezviridzwa, vashandi, zvishandiso, zvevane utsinye vanobva kune dzimwe nyika 'elite' mune iyi yekufungidzira. Dai chete isu taigona kugonesa vanovenga vanobva kune dzimwe nyika 'elite' kuzvirongedza pachavo kuSaturn. Asi zvinosuruvarisa kuti ivo havazviita nekuzvidira vakapihwa zvakanakira uye zvikwanisiro zvavanazvo kuburikidza nenzvimbo dzakakosha pazvirairo zvepasi pano.
« Elon Musk ane ukama nemurume we transgender here? Dzidza mimhanzi yeGrimes pano
Pedophile Jeffrey Epstein's neurosciology zvidzidzo zvakabatanidzwa zvakanyanya kune yakakosha pasi rose AI network »
Total Visits: 15.835.129